लाभांश Qingling Motors Co., Ltd.
2020 मा वर्ष QIN.F, लाभांश को इतिहास Qingling Motors Co., Ltd. को साझा मा लाभांश को भुक्तानी मिति, लाभांश उपज Qingling Motors Co., Ltd.। के Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश भुक्तानी गर्दछ? के लाभांशले Qingling Motors Co., Ltd. भुक्तानी गर्दछ?
Qingling Motors Co., Ltd. स्टक मूल्य अनलाइन चार्ट लागत इतिहास पूंजीकरण लाभांश आय
जब Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश तिर्न सक्छ?
Qingling Motors Co., Ltd. वार्षिक रूपमा लाभांश, QIN.F को साझा मा लाभांश अन्तिम भुक्तानी 03/06/2019 छ दिन्छिन्।
Qingling Motors Co., Ltd. ले के लाभांश भुक्तानी गर्दछ?
कम्पनी Qingling Motors Co., Ltd. ले पछिल्लो समयमा प्रति 0.18 € लाभांश प्रति शेयर र वार्षिक लाभांश उपज 82.74 % थियो।
अर्को लाभांश पेआउट मिति कहिले Qingling Motors Co., Ltd. हो?
Qingling Motors Co., Ltd. को साझा मा लाभांश को अर्को भुक्तानी जुन 2021 आशा छ।
Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश allstockstoday.com एक वास्तविक समय सेवा हो Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश एक तालिका र ग्राफ को रूप मा लाभांश। लाभांशको रसीदको मिति र कम्पनीका नेताहरूले निर्धारण गर्छन्। हाम्रो सेवाले लाभांश भुक्तानहरूको ईतिहास देखाउँदछ Qingling Motors Co., Ltd. र लाभांशको भुक्तानीको लागि भविष्यवाणी। Qingling Motors Co., Ltd. मा प्रत्येक स्तम्भ लाभांश चार्ट एक निश्चित मिति मा एक भुक्तानी मेल खान्छ।
Qingling Motors Co., Ltd. (QIN.F)
लाभांश Qingling Motors Co., Ltd. भुक्तानी इतिहास
पट्टीको उचाईले लाभांश भुक्तानीहरूको मात्रा देखाउँदछ। चार्टको स्तम्भको उचाई परिवर्तन स्पष्ट रूपमा अन्तिम मितिहरु को लागी भुक्तानी को रकम मा परिवर्तन देखाउँदछ। पछिल्ला वर्षहरुमा Qingling Motors Co., Ltd. द्वारा प्राप्त लाभांश को अनुसूची हाम्रो लाभांश सेवा पृष्ठ को शीर्ष मा प्रदर्शित छ। Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश भुक्तानी तालिका विगत २- years बर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
लाभांश भुक्तानी मिति Qingling Motors Co., Ltd.
QIN.F शेयरमा लाभांश को भुक्तानी को मिति अनलाइन सेवा तालिका मा प्रस्तुत छन्। Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश तालिका लाभांश भुक्तान मिति अनुसूची भन्दा बढी जानकारी समावेश गर्दछ। तालिकाको एक लाइनमा एक भुक्तान मिति छ। वर्षको लागि तालिकामा पows्क्तिहरूको स By्ख्याबाट, तपाईं बुझ्न सक्नुहुनेछ वर्षको लागि Qingling Motors Co., Ltd. मा कति पटक लाभांश तिरेको थियो। लाभांश भुक्तानी को रकम Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश तालिकाको दोस्रो स्तम्भमा छ।
QIN.F शेयरहरूमा लाभांश भुक्तानी मिति
प्रति शेयर भुक्तानी रकम।
लाभांश उपज प्रति शेयर प्रति वर्ष प्रति भुक्तानी लाभांश को रकम को अनुपात हो।
03/06/2019 0.18 EUR 82.74%
01/06/2018 0.2 EUR 83.73%
14/06/2017 0.18 EUR 67.64%
20/06/2016 0.19 EUR 68.18%
01/06/2015 0.16 EUR 56.94%
13/06/2014 0.13 EUR 57.78%
07/06/2013 0.1 EUR 56.82%
08/06/2012 0.12 EUR 68.18%
28/04/2011 0.1 EUR 47.85%
29/04/2010 0.091 EUR 52.19%
लाभांश भुक्तानी को रकम Qingling Motors Co., Ltd. तालिकामा प्रति शेयर देखाइएको छ। Qingling Motors Co., Ltd. प्रति शेयर लाभांश भुक्तान डलर मा देखाइएको छ। लाभांश उपज Qingling Motors Co., Ltd. - एक वर्षको लागी लाभांश को अनुपात बराबर अनुमानित रकम Qingling Motors Co., Ltd. को एक शेयर को मूल्य को लागी बस्ती अवधि Qingling Motors Co., Ltd. शेयरमा लाभांश उपज आज 82.74 % छ।
लगानीको नाफाको मुख्य सूचक शेयरको मूल्यको मूल्यमा परिवर्तनको साथ लाभांश उपज हो। Qingling Motors Co., Ltd. को इतिहास लामो समय मा एक कम्पनी को सफलता को मुख्य सूचक हो। पछिल्लो २० भुक्तानीको लागि लाभांश उत्पादनको इतिहास Qingling Motors Co., Ltd. लाभांश उपज तालिकामा देखाइएको छ। संगठनको लाभांश उपजको साथ तालिकाको पहिलो प yield्क्तिमा, Qingling Motors Co., Ltd. सबैभन्दा धेरै प्रदर्शन गर्दछ।
शेयरहरूको लागत Qingling Motors Co., Ltd.
एक्सचेंज स्टक Qingling Motors Co., Ltd. आज, स्टक मूल्य QIN.F अहिले अनलाइन छ।
शेयरहरू QIN.F एक्सचेंज अनलाइन
Qingling Motors Co., Ltd. वास्तविक समयमा स्टक उद्धरण, QIN.F स्टक मूल्य अनलाइन, QIN.F चार्ट।
Qingling Motors Co., Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
Qingling Motors Co., Ltd. गर्न यूरो चार्ट व्यापार को शुरू पछि।
Qingling Motors Co., Ltd. पूंजीकरण
आज QIN.F शेयरहरूको व्यापारिक मात्रा र Qingling Motors Co., Ltd. को पूंजीकरण इतिहास।
वित्त Qingling Motors Co., Ltd.
2020 मा QIN.F लाभांश उपज QIN.F को साझा मा लाभांश को भुक्तानी मिति।
राजस्व Qingling Motors Co., Ltd.
2020 को लागि Qingling Motors Co., Ltd., Qingling Motors Co., Ltd. वार्षिक आय को वित्तीय परिणामहरु मा रिपोर्ट गर्नुहोस्।